मेरो लाइफस्टाइल	|| 30 December, 2021
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीबीच एउटा समानता छ । त्यो समानता हो, यी दुवै कम्युनिस्ट नेता बेला–बेला आ–आफ्ना कार्यकर्तामाझ गजबकै प्रहसन गर्छन् । दुवैको अर्को समानता के पनि हो भने दुवै नेता आफ्ना बेढंगी प्रहसनलाई कार्यकर्तालाई थपडी बजाएर मन पराउनै पर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिले थाँती राखौं । किनकि, प्रचण्डको पार्टी अहिले महाधिवेशनको मेलामा मग्न छ ।
प्रचण्डले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा १२ पुसमा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आफैँमा प्रचण्डको प्रहसनभन्दा कम देखिएन ।
काठमाडौंमा जारी महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ नाम दिइएको राजनीतिक दस्तावेजमाथि चर्को आलोचना भएको छ ।
प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा धेरै कुरा उठाएका छन्, त्यसमध्ये धेरै मुद्दामा प्रचण्ड अहिले आलोचित बनेका छन् । यसमा पनि विशेषगरी अमेरिकाको आलोचना, भारत भक्ति र चीन फुस्ल्याउने जुन शब्दहरू प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भेला पारेका छन्, त्यो अहिले उनकै पार्टीभित्र आलोचित बन्न पुगेको छ ।
पहिलो हो, अमेरिकाको कुरा । प्रचण्डले प्रतिवेदनमार्फत चीनलाई रोक्न अमेरिकाले भारत, बेलायत र अस्ट्रेलियासँग सम्बन्धलाई कसिलो बनाएको दाबी गरेका छन् । कतिसम्म भने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले साझेदार देशसमेतको साथमा युद्धको कसरत गरिरहेको बताउन पनि प्रचण्ड पछि परेका छैनन् । यसैका लागि अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरेको उनको तर्क छ । यसलाई उनले नयाँ शीतयुद्धको संज्ञा पनि दिएका छन् । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्तिको नाम दिँदै प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकालाई विश्वकै खलनायकको रूपमा चित्रण गर्न धेरै शब्द खर्चिएका छन् ।
त्यसो त अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ को संज्ञा दिनु कम्युनिस्टहरूको आधारभूत चरित्र नै भयो । तर, प्रचण्डको यो प्रतिवेदनले अमेरिकासँग प्रचण्डको व्यक्तिगत सम्बन्ध सहज अवस्थामा रहेनछ भन्ने प्रष्ट पार्छ । यसैले उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) को खुलेर विरोध नगरे पनि नेपालबाट एमसीसी सहजै पास हुन नदिने संकेत आफ्नो प्रतिवेदनबाट गरिसकेका छन् ।
अमेरिकालाई आफूले फुटेको आँखाले पनि हेर्न नचाहेको जस्तो शैलीमा प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । तर, प्रचण्ड भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने चुपचाप छन् ।
माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्ने बेलादेखि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दस्तावेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने शब्द अझै ताजै छ ।
यी तीनै प्रचण्ड हुन् जसले ०५२ फागुनदेखि शुरु गरेको जनयुद्घका बेलामा भारतसँग सुरुङयुद्घ गर्ने भन्दै सुरुङ खन्न लगाएजस्तो अभिनय गर्न पनि भ्याएका थिए ।
बुझ्न कठिन छैन–‘त्यो एक चटक थियो, यो एक चटक हो ।’
अमेरिकामाथि शब्दवाण चलाएका कमरेड प्रचण्ड अहिले भारतप्रति मौन हुनुको अर्थ अहिले माओवादीकै कार्यकर्ताले खोजिरहेका छन् । महाधिवेशनको मेला भर्न आएका माओवादी प्रतिनिधिहरूले पनि प्रचण्ड भारतप्रति नतमस्तक देखिएपछि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
कतिसम्म भने प्रतिवेदनमाथिको समूह छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले ‘भारतीय विस्तारवाद’ प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा किन नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसो भए प्रचण्डका लागि अब भारत विस्तारवादी हुन छाडिसकेको हो ? स्वाभाविक हो, यो प्रश्न महाधिवेशनमा उठेको छ ।
कतिसम्म भने प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित हुनुलाई उपलब्धि मान्न पनि अन्कनाएका छन् । त्यसलाई अपनत्वसमेत लिइएको छैन । जबकि, प्रचण्डले आफ्नो पहलमा नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको देशको स्मरणमा अझै ताजै छ । त्यसबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक थिए भन्ने कुरा पनि धेरैको स्मृतिमा छँदैछ ।
तर, अहिले प्रचण्डको स्मरण शक्ति कसरी कमजोर हुन पुग्यो ? के अब नेपाल–भारतबीच सीमालगायत कुनै पनि विवाद नभएको प्रचण्डको ठहर हो ? प्रचण्डको प्रतिवेदनबाट उक्त कुरा गायब हुनासाथ भौगोलिक यथार्थता पनि बदलिएको हो ? यस्ता प्रश्नहरूमा अहिले देशभरिबाट काठमाडौंको चिसोमा भेला भएका माओवादी प्रतिनिधिहरूले तात्तातो बहस गरिरहेका छन् ।
‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ को नारा लगाउँदै नेपालमा जन्मिएका कम्युनिस्टहरूमध्ये स्वयं प्रचण्ड पनि एक हुन् ।
तर, अहिले आएर प्रचण्ड जसरी आफ्नो प्रतिवेदनमा भारतप्रति मौन देखिए त्यसबाट के अब अर्थ लगाउन सकिन्छ ?
चीन र भारतलाई एकसाथ फुस्ल्याउन सायद प्रचण्ड अमेरिकाबारे आक्रामक देखिएका हुन सक्छन् ।
यदि, यस्तो हो भने ‘नेपाल–भारत भाइ–भाइ, अमेरिकी साम्राज्यवाद बाईबाई’ प्रचण्डको नयाँ नारा हुन सक्छ, कम्तिमा उनको प्रतिवेदनले यस्तै संकेत गर्छ ।
प्रचण्डको मुखारविन्दुबाट पनि सम्भवतः अबका दिनमा यही नारा घन्किने छ ।
[…] यो पनि…त्यो एक चटक थियो,यो एक नाटक हो […]